Ilay tantara miafina ao ambadiky ny logo Hollywood Studios | Famoronana an-tserasera
Efa mba nanontany tena ve ianao hoe maninona no toy izao ireo logo miseho amin'ny sarimihetsika? Iza ilay zazalahy eo amin'ny volana amin'ny sary famantarana DreamWorks? Iza no maodely asongadin'ny intro Columbia? Iza amin'ireo tendrombohitra no nanome aingam-panahy ny sary famantarana Paramount?
Vakio hatrany dia ho hitanao izany!
1 DreamWorks SKG: Ankizilahy amin'ny volana
2 Metro-Goldwyn-Mayer (MGM): Leo ilay Liona
3 Fox faha-20: The Searchlight Logo
4 Paramount: ny tendrombohitra be voninahitra
5 Warner Bros: Ny Shield WB
6 Sarin'i Columbia: Ilay Ramatoa mitondra ny fanilo
DreamWorks SKG: Ankizilahy amin'ny volana
Tamin'ny 1994, ny talen'ny Steven Spielberg, filohan'ny studio Disney Jeffrey Katzenberg, ary ny mpamokatra David Geffen dia niara-nivory nahita studio vaovao antsoina hoe DreamWorks.
Steven Spielberg dia nitady sary famantarana an'ny Dreamworks izay mampatsiahy ny vanim-potoana volamena an'i Hollywood. Tonga tao an-tsainy fa sarin'ny lehilahy iray nipetraka tamin'ny volana iny nanjono. Nanapa-kevitra ny hiresaka amin'ny mpanara-maso manokana ny vokatra antsoina hoe Dennis Muren avy amin'ny Industrial Light and Magic, olona iray izay niara-niasa taminy tamina fotoana maromaro koa. Nanolo-kevitra i Dennis fa ho sary hosodoko vita amin'ny tànana izy io, izay noheverin'i Spielberg ho hevitra tsara, ary nanakarama ny mpanakanto Robert Hunt handoko izany. Nanolotra fomba hafa hisolo tena azy izy, ao anatin'izany ny fanoloana zazalahy mipetraka amin'ny volan-volana sy ny jono, zavatra nahasarika an'i Steven kokoa. Ilay zaza? Ity tovolahy ity dia momba an'i William, zanakalahin'i Robert Hunt.
Metro-Goldwyn-Mayer (MGM): Leo ilay Liona
Tamin'ny 1924, ny mpanao gazety Howard Dietz dia namolavola ny sary famantarana "Leo the Lion" ho an'ny Samuel Goldwyn Picture Corporation. Izy dia mifototra amin'ny ekipa atletisma ao amin'ny oniversite Columbia University, ny Lions. Rehefa nitambatra tamin'ny Metro Pictures Corporation sy i Louis B. Mayer Pictures ny Goldwyn Pictures dia nitazona ilay sary famantarana ilay MGM vao niforona.
Nanomboka teo dia nisy liona dimy nilalao ny anjara toeran'ny "Leo liona." Ny voalohany dia i Strips, izay nipoitra teo am-baravaran'ny sarimihetsika mangina MGM tamin'ny 1924 ka hatramin'ny 1928. Ny liona manaraka, Jackie, no liona MGM voalohany izay re ny fieron'ny besinimaro. Na dia nangina aza ireo sarimihetsika, dia nilahatra tamin'ny grafofaonina ny filaharana nalaza nataon'i Jackie rehefa niseho teo amin'ny efijery ny sary famantarana. Io koa no liona voalohany niseho tao Technicolor tamin'ny 1932.
Ny liona fahatelo ary angamba ny malaza indrindra dia i Tanner (na dia i Jackie aza dia mbola ampiasaina amin'ny fotoana mitovy amin'ny sarimihetsika mainty sy fotsy MGM ankehitriny). Taorian'ny fampiasana anonyme tsy fantatra anarana (miaraka amina mane lehibe) sy liona fahefatra dia nifidy an'i Leo i MGM, izay nampiasain'ny studio hatramin'ny 1957.
Ny teny filamatra "Ars Gratia Artis" an'ny orinasa dia midika hoe "kanto ho an'ny kanto."
Fox faha-20: The Searchlight Logo
Tamin'ny 1935, ny Twentieth Century Pictures sy ny Fox Film Company (orinasa mpanao teatra taloha) dia nitambatra mba hamorona Twentieth Century-Fox Film Corporation (izay nandatsaka ireo teny roa farany).
Ny sary tany am-boalohany sary Twentyeth Century Pictures dia noforonina tamin'ny taona 1933 avy amin'ny mpanan-tany malaza Emil Kosa Jr Taorian'ny fampiraisana dia nosoloin'i Kosa fotsiny ny "Pictures, Inc." miaraka amin'i "Fox" ho an'ny sary famantarana ankehitriny. Ho fanampin'ity logo ity dia nalaza ihany koa i Kosa noho ny sary hosodoko matte an'ny Statue of Liberty rava ao amin'ny Planet of the Apes (1968).
Angamba nalaza toa ny sary ihany ilay hira "Faha-20 taonjato faha-XNUMX", noforonin'i Alfred Newman, talen'ny mozika United Artists tamin'izany.
Paramount: ny tendrombohitra be voninahitra
Ny Paramount Pictures Corporation dia natsangana tamin'ny 1912 ho orinasa malaza ho an'ny mpilalao horonantsary nataon'i Adolph Zukor, ary ny mogul teatrista Frohman, Daniel sy Charles.
Ny sary famantarana Paramount 'Majestic Mountain' dia namboarin'i WW Hodkinson ho doodle nandritra ny fihaonany tamin'i Zukor, miorina amin'ny tendrombohitra Ben Lomond nihaona taminy nandritra ny fahazazany tao Utah (ny sary mihetsika dia mety nataon'i Artesonraju avy any Peroa) . Io no sary famantarana Hollywood tranainy indrindra izay mbola velona mandraka androany.
Ny sary tany am-boalohany dia manana kintana 24 izay nanondro ny kintan'ny sarimihetsika 24 nokaramain'ny Paramount (kintana 22 izao, na dia tsy misy olona afaka milaza amiko aza ny antony nihena ny isan'ny kintana). Ny loko matte tany am-boalohany koa dia nosoloina tendrombohitra sy kintana novokarin'ny solosaina.
Warner Bros: Ny Shield WB
Warner Bros (eny, io "Bros" tsy "Brothers" ara-dalàna io dia natsangan'ny rahalahy jiosy efatra nifindra monina avy tany Polonina: Harry, Albert, Sam, ary Jack Warner. Raha ny marina dia tsy ireo no anarana nahaterahany. Teraka i Harry "Hirsz," Albert dia "Aaron," Sam dia "Szmul," ary Jack dia "Itzhak." Tsy fantatra koa ny anarany farany - nisy ny olona nilaza fa "Wonsal", "Wonskolaser" na i Eichelbaum aza, talohan'ny nanovana azy ho "Warner".
Tamin'ny voalohany, Warner Bros dia nanana olana tamin'ny fisarihana talenta ambony. Tamin'ny 1925, noho ny fikirizan'i Sam, Warner Bros. dia nanao ny sarimihetsika voalohany «Talking Pictures» (Rehefa henony ny momba ny hevitr'i Sam dia nilaza tamim-pahatokiana i Harry hoe "Iza no te-handre ny resaka ataon'ireo mpilalao?"). Nahazo ny isa tamin'ny orinasa izany ary nampalaza an'i Warner Bros.
Ny logo Warner Bros. dia nandalo fanitsiana maro araka ny hitanao.
Sarin'i Columbia: Ilay Ramatoa mitondra ny fanilo
Columbia Pictures dia natsangana tamin'ny taona 1919 avy amin'ny mpirahalahy Harry sy Jack Cohn, ary Joe Brandt amin'ny Sales Cohn-Brandt-Cohn Film. Ny ankamaroan'ny famokarana studio voalohany dia tetik'asa ambany teti-bola mandra-pahatongan'ny rahalahin'i Cohn nividy an'i Brandt tamin'ny 1924 ary nanapa-kevitra ny hanova ny anaran'ny studio ho Columbia Pictures Corporation mba hanatsarana ny sariny.
Ny sary famantarana studio dia i Columbia, ilay endrika vehivavy any Amerika. Namboarina tamin'ny 1924 ary ny mombamomba ny maodely "Torch Lady" dia tsy naorina tamin'ny fomba mazava (na dia vehivavy am-polony mahery aza no nilaza fa.)
Tao amin'ny tantaram-piainany tamin'ny 1962 dia nilaza i Bette Davis fa i Claudia Dell no maodely, fa tamin'ny 1987 kosa ny magazine People dia nilaza fa ilay mpilalao sarimihetsika dia i Amelia Batchler ilay maodely. Tamin'ny 2001, nilaza ny Chicago Sun-Times fa momba ny vehivavy iray niasa ho extra tany Columbia antsoina hoe Jane Bartholomew. Raha dinihina ny fiovan'ny sary famantarana nandritra ny taona maro dia azo antoka fa marina ireo fanambarana telo ireo.
Ny sary famantarana ankehitriny dia noforonina tamin'ny taona 1993 avy amin'i Michael J. Deas, izay nokaramain'ny Sony Pictures Entertainment hamerina ilay vehivavy amin'ny endriny "klasika".
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ilay tantara miafina ao ambadiky ny logo an'ny studio Hollywood